Reading – AELC
အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာသူတွေ စဉ်းစားကြည့်ကြဖို့ …
Posted on November 15, 2021 | Posted on imirror | LeaveaComment on အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာသူတွေ စဉ်းစားကြည့်ကြဖို့ …
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား လေ့လာသူတွေဟာ … တတ်ချင်တယ် .. တတ်ချင်တယ် … ပါးစပ်က တဖွဖွ ပြောကြပါတယ် … #ဘာလို့တတ်ချင်တာလဲ … ? … ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မေးကြည့်ပါ … နိုင်ငံတကာသုံးဘာသာစကားဖြစ်လို့ တတ်ထားရင် ကောင်းတယ် အလုပ်မှာ လိုအပ်တယ် … စာမေးပွဲဖြေမယ် … စသည် စသည်ဖြင့် … အဖြေတွေ အမျိုးမျိုးထွက်လာပါလိမ့်မယ် … ထပ်မေးကြည့်ပါ … #ဘယ်လောက်တတ်ချင်တာလဲ … ? ထမင်းစား ရေသောက် ပြောတတ်/ ဆိုတတ်ရုံ လုပ်ငန်းခွင်မှာ တတ်အောင် … Professional ဖြစ်အောင် … ထပ်မေးကြည့်ပါဦး … #အချိန်ဘယ်လောက် ၾကာၾကာ ထားပီး ေလ့လာမလဲ …? ဘယ်ဘာသာရပ်မဆို ကုန်ဆုံးတယ်လို့ မရှိပါ … […]
Posted in Reading, Speaking